Ikhamera encinci yeWiFi yeKhamera, i-IP yokuNgena kwi-Intanethi yeKhamera, i-Nanny Cam, i-HD 720P Ikhamera yoKhuseleko lwaseKhaya nge-Vision yasebusuku ngeNdlela yesibini yokuKhangelwa kwe-Audio Motion, i-Baby Camera Pet Monitor (SPY074) | Izisombululo ze-OMG
Ukusekwa ngokulula lula: nge-mobile app, kulula ukuseta kunye nokujonga ikhamera ngaphakathi komzuzu omnye. Ukuchongwa kweMotion: i-imeyile, i-FTP, okanye izaziso zokutyhala ezisekwe kubuchwephesha bokubona iteknoloji, i-auto Snapshot.
Ukubukela kude kwaye uphulaphule: Ukujonga okukude okwenzekayo, mamela ubomi obunomdla kwisoftware ene-Iphone, izixhobo ze-Android kunye ne-Ipad.
Isisombululo se-HD 720P kunye ne-80 i-lens wide angle angle: ubona ngokucacileyo ngakumbi, obanzi kwaye bukhali. Ukujikeleza kwe-360 degree ukukhetha ingelosi ehamba phambili ukujonga iliso lekhaya lakho.
Umboniso weMini kuphela, Akukho mbono wasebusuku, uMic built-in kuphela, akukho sithethi esakhelwe kuyo, ngoko unokuthetha kuphela kodwa akakwazi ukuva kwikhamera. Akukho Slot yeSard Card, ayikwazi ukuxhasa ukurekhoda kwe-SD Card nokudlala. Sebenza nge-WiFi Router ye-2.4Ghz, kungekhona i-5.0Ghz.
I-WiFi Security Camera ikakunceda ubukele ikhaya lakho, umntwana, umdala, isilwanyana nanini na naphi na.
Isisombululo se-HD 720P esifanelekileyo:
Unokubona imifanekiso ecacileyo nale ncomo ephezulu 720P ikhamera.
Mamela lakho ikhaya:
Ngomsindo, unokuva oko kwenzekayo ekhayeni lakho.
Ukuseta ngokulula, iPlagi kunye nokudlala:
I-One-Key Key technology ye-WiFi ne-app yeselula yenza ukuba kusetyenziswe lula ngaphakathi kwemizuzu ye-5.
I-app yeselula elula yenza ukuba umboniso osekude uphi nawuphi na, kwaye kukunceda uhlale umzuzu kunye nosapho lwakho.
Iqondo lokujonga elibanzi:
Ikhamera ye-120 ye-angle-angle angle kunye ne-4x zoom zoom idijithali ikunceda ukhangele i-angle ye-space.
Ukubeka esweni ngasinye isistim ngezaziso ze-imeyile kunye nesifaki.
Kubaluleka: Le khamera inokusebenza kuphela ne-2.4Ghz i-WiFi router, kungeyi-5GHZ.
I-WiFi Security Camera * 1
I-Adapter yamandla * 1
Isikhokelo sokuFakela ngokukhawuleza * 1
Ukukhangela ibakaki kunye nezikrini * 1
6.9 x 4 x 2.5 intshi
8847 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-2 Namhlanje